Indlela yokwenza iSpoon Sing Sing okanye iProjecting Spoon Project
I-spoon yokucula okanye i-spoon ye-screaming igama leprojekthi eyomileyo ye-ice apho ubangela ukuba isipuni senze ukucula okanye ukukhala. Nantsi indlela yokwenza iphrojekthi ye-spoon yomculo kunye nenkcazo yokuba isebenza njani. Ungabukela kwakhona ividiyo yami yokupula okanye ukukrazula.
Ukucula iiSpoon Materials
Yenza i-Spoon "Hlaba"
Gcoba isipuni ngamanzi ashushu.
Susa isipuni emanzini uze ucinezele i-spoon efudumele ngokumelene neqhwa elomileyo elibandayo. I-spoon iya kubangela ukuba iqhwa elomileyo libe ne-sublimate kwi-carbon dioxide umphunga. Uyakuva i-spoon ikhuphe uhlobo oluvakalayo oluvakalayo olunjengomculo okanye ukukhala.
Indlela iSpoon Sing Singenza ngayo
Xa ucinezela i-spoon efudumele ngokumelene neqhwa elomileyo, i-sublimation iyanda. I-carbon dioxide igesi ekhutshelwe iifowuni ngokuchasene ne-spoon ngexesha elifanayo ufaka ingcinezelo yokuphosa i-spoon kwiqhwa elomileyo. Ukunyuka kweengcinezelo kuvela ngokukhawuleza, kuvelisa amaza omsindo.
Nangona ngokuqhelekileyo uza kubona oku kubonakaliswa kwenziwa ngokusebenzisa i-spoon, isebenza nayiphi na into yensimbi. Insimbi isebenza bhetele ngenxa yokuqhutyelwa kwe-thermal, kodwa uzive ukhululekile ukuzama ezinye izinto.
Ukubonakalisa okulula kwe-Photosynthesis - iiDiski zeSpinach ezisezantsi
Indlela yokudibanisa isitshixo esitshintshiweyo seSwitzerland 'Sithumela' ('ukuthumela')
Inkcazo yeNkcazo yeNkcubeko Eyaziwayo
Amazwi afungayo kunye nantoni na ayisebenzisayo?
Unyaka omtsha Izibingelelo ngesiJamani, kwiNgingqi ngeNgingqi